दु:खद खबर: “गण्डकी छड्के”का संयोजकको नि’धन, त्रिपाठिले लेखे यस्तो मनछुने स्टाटर” – Dainik Samchar
May 31, 2021 109
चर्चित कार्यक्रम गण्डकी छड्केका संयोजक को दुखद नि’ध’न भएको छ। कार्यक्रम प्रस्तोता अपिल त्रिपाठिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उक्त जानकारी गराएका हुन। संयोजकको नि’ध’न पश्चात कार्यक्रम बन्द पनि बन्द भएको छ। यसबारे प्रस्तोता अपिल त्रिपाठिले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै:
नमस्कार ! गण्डकी छड्के प्रसारण नभएको ३ हप्ता भयो । को’रोना संक्र’मणका कारण गण्डकी छड्केका संयोजकको दुखद नि’ध’न भएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । त्यसपछी हामी शो’कमा थियौ, क्वारेन्टीनमा पनी थियौ । म सुरक्षित भएपनी अझै हाम्रा केही साथी संक्र’मित हुनुहुन्छ । केही कुरा मिलाउन पर्ने छन, म फिल्डमा निस्केको छैन, तर तपाईका समस्याको समाधानको पहलका लागी फिल्डमा निस्कन नसकेकोमा छटपटी भैरहेको छ ।
यद्यपी हरेक दिन रुदै, अक्सीजन पाइएन, बेड पाइएन, एम्बुलेन्स पाइएन भन्ने फोन र म्यासेजहरु गर्ने महानुभावहरुलाई सक्दो सहयोग र समन्वय गरेकै छु । गर्ने नै छु । त्यति मात्र होइन हिसाव पनी राखेकै छु : सामाग्री खरीदका घोटाला देखी सरकारले गरेको संक्रमितको ‘हत्या’ सम्म । सत्ताका लागी जनताको स्वास्थ्य संग गरीएको खेलबाड देखी साइबर सेनाको ‘आ’क्रमण’ सम्म । नालायक, तोरीहरुको हिसाव हुन्छ . आफ्नो गाउँ–आफै बनाऔ । आफ्नो ज्यान–आफै बचाऔ । सुरक्षित रहौ । हामी निस्कन्छौ अब।